Muxuu ka yiri Guardiola wararka Manchester City la xiriirinaya Harry Kane iyo Erling Haaland? – Gool FM
Muxuu ka yiri Guardiola wararka Manchester City la xiriirinaya Harry Kane iyo Erling Haaland?
(Manchester) 07 Luulyo 2021. Tababaraha Manchester City ee Pep Guardiola ayaa sheegay in kooxdiisa aysan la soo saxiixan karin weeraryahan cusub oo bedelaya Sergio Aguero kahor inta uusan bilaaban xilli ciyaareedka cusub, sababo la xiriira qiimaha sare ee lagu doonayo.
Wararka ka imaanaya gudaha England ayaa sheegay in Manchester City ay dooneysay inay la soo saxiixato weeraryahanka kooxda Tottenham Hotspur ee Harry Kane, kaddib markii uu ka tagay Aguero, dhammaadka xilli ciyaareedkii tagay kaasoo ku biiray Barcelona.
Harry Kane waxaa lagu qiimeeyaa in ka badan 100 million pounds, taasoo ah $137.99 million, halka Erling Haaland uu u qalmo 150 million pounds.
Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa u sheegay telefishanka TV3 ee dalka Spain:
“Marka la fiiriyo qiimaha la sheegay, ma soo qaadan doono weeraryahan cusub, waa wax aan macquul aheyn mana awoodi karno.”
“Kooxaha oo dhan waxay la ildaran yihiin dhaqaale xumo, anaga kama soocani, waxaan heysanaa Gabriel Jesus iyo Ferran Torres, oo ku fiicnaa booskan.”
“Waxaan ku heysanaa akadeemiyada koox dhalinyaro ah, wax badana waan ku ciyaarnay weeraryahan been abuur ah, fursad ayaa jirta oo ah inaan la soo saxiixan weeraryahan kahor xilli ciyaareedka cusub.”
Manchester City ayaa ku bilaabi doonta difaacashadeeda horyaalka Premier League kulanka ay wajahayaan kooxda Tottenham Hotspur 15-ka August.
“Messi ayaa ka fiican Neymar” – Halyeey reer Brazil ah